Abaalmarinta Caddaaladda - Sheekooyinka Guusha - Abu Solaiman
Abu Solaiman wuxuu ka mid ahaa hoggaamiyeyaashii ugu sarreeyay ee Kooxda Abu Sayyaf, oo ah koox Islaamka xag-jirka ah oo ka hawlgala dalka Philippines. Intii uu ahaa madaxa hawlaha iyo saadka ASG, Solaiman, iyo Khadaffy Janjalani, waxay ka mas’uul ahaayeen afduubyadii iyo dilkii loo geystay laba qof oo ay jinsiyaddoodu ahayd Mareykan iyo Filibiin. Waxaa lagu eedeeyay afduubyadii Martin iyo Gracia Burnham iyo laba qof oo kale oo Mareykan ah. Wuxuu kaloo Solaiman ka qayb qaatay madax gooyadii lagu sameeyay Guillermo Sobero, oo ahaa qof kale oo Mareykan ah. Solaiman mas’uul kama ahayn weerarradaan oo kaliya wuxuu kaloo ka qayb qaatay qorshaha iyo fulinta weerarro badan oo lagu qaaday danaha Mareykanka, waxaana ka mid ahaa weerarradii lagu qaaday Safaaradda Mareykanka ee Manila iyo Superferry 14 iyo qaraxyadii bamka ee Valentines Day, oo ay guud ahaan ku dhinteen ama ku dhaawacmeen dad aysan quseynin.
16-kii Janaayo, 2007, Ciidamada Hubeysan ee dalka Philippines (AFP), oo ku hawlgalay warbixin laga helay labo qof oo Filibiin ah, waxay qaadeen weerar waxayna dileen Solaiman. Hawlgalkan wuxuu ahaa mid lagu guuleystay waxaana suurageliyay in la adeegsado macluumaadkii ay shakhsiyaadkan siiyeen ciidanka Philippine. Dhammaan macluumaadka iyo gargaarka ay bixiyeen shakhsiyaadkan waxay aad u anfaceen in la helo, la dilo iyo kaddibna la aqoonsado Abu Solaiman. Sidii geesinimada lahayd ee ay taageero uga geysteen darteed, waxaa dadkii reer Filibiin ahaa la siiyay abaalmarin guud oo gaaraysa $5 milyan (245 milyan oo beesos) oo ay Dawladda Mareykanka ku siisay xaflad uu Safiirka Mareykanka ee dalka Filibiin u fadhiya uu ku qaban qaabiyay jasiiradda Jolo 7-dii Juun, 2007.
Waxaa horrantii 1990-dii Kooxda Abu Sayyaf aasaasay Abdurajik Janjalani, oo ah walaalkii ka weynaa Khadaffy Janjalani. Abdurajik Janjalani ayaa Afqaanistaan kula kulmay Usama bin Ladin oo iminka dhintay marki uu la dagaallamayey Soofiyeetka waxaana ku dhalatay in uu dalka Filibiin ka aasaaso dhaqdhaqaaq goosad oo Islaam ah. I Tan iyo 1990-yadii, ASG waxay dhowr weerar oo qaraxyo bam ah ku qaadeen hanti ay leeyihiin Mareykanka iyo Filibiin. Dhowrkii sano ee la soo dhaafay, waxay kaloo ASG ka dambeeyeen dhowr hawlgal oo dad lagu afduubay si ay lacag u helaan, waxayna bartilmaameed ka dhigteen ganacsatada deegaanka iyo dad dalxiis ku jira. Wasaaradda Arrimaha Dibedda Mareykanka waxay ASG ku tilmaantay in ay tahay urur argagixiso oo ajnabi ah oo weli khatar ku ah xasilloonida dalka Filibiin.